एमाले स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्‍ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजे बैठक बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न र विधान अधिवेशनको तयारी गर्नका लागि बैठक आयोजना गरिएको बताए । यही साउन ४ गते १४औँ केन्द्रीय कमिटी बैठक तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजे बोलाइएको छ । उनका अनुसाार पार्टी संरचना २०७५ जेठ २ गते अगाडि फर्काउँदै आइतबारको बैठकमा नेपाल पक्षका नेतालाई समेत डाकिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ १५:१६
वीरबहादुर के फेरि ‘बुद्धु’ बन्ला ?
यतिविधि धमिरा नभएका भए कसैका छातीमा विभेदको भाला रोपिँदा सबैलाई दुख्थ्यो । पीडामा कोही चिच्याउँदा सबैको आँसु चुहिन्थ्यो । समय ‘आधा हर’ हुँदा सबैको मासु आधै हुन्थ्यो । सबैतिर समय धुलिएर उडिरहेको धुलो हुँदैनथ्यो ।
श्रावण २, २०७८ गिरि श्रीस मगर
पूर्वाभासःम यहाँ जुन कथा भन्दैछु, यसको पात्र युगयुगदेखि भोकले जीर्ण–विदीर्ण थियो ।
त्यसैले ऊ, साँझबिहानमा हातमुख जोड्ने मानो चाहन्थ्यो । घाम र झरी ओत्ने एउटा छानो चाहन्थ्यो । धेरै त के पो चाहेको थियो र ? बस् रोगमा ओखतीमुलो होस् । नानीहरूले आफ्ना आँखामा अक्षर–ज्योतिको उज्यालो भर्न पाऊन् । ठूलो भएपछि आफ्नै माटोमा सानोतिनो इलम गर्न पाऊन् ।
ऊ यस्तै केही चाहन्थ्यो । स–साना उसका इच्छा थिए । स–साना उसका सपना थिए । ऊ अर्थात् वीरबहादुर ।
वीरबहादुरले आफ्नो नामलाई सार्थक तुल्याएकै हो । सयौं वर्षदेखि शोषणको दाम्लोले बाँधिएर उत्पीडनको कोर्रा खाइरहेको उसले त्यो दाम्लालाई चुँडालेर वीरता प्रदर्शन गरेकै हो । शासकले कोपर्दा–कोपर्दा सारङ्गी बनेको शरीरलाई पनि आँधीहुरीमा उभ्याएर अघि बढ्दै उसले वीरता देखाएकै हो ।
अँध्यारो सुरुङबाट निस्किएपछि उसको मुटु व्यग्रतापूर्वक धड्किरहेको थियो । उसले सोच्यो–अब ऊ स्वतन्त्र छ । सुरक्षित छ । त्यो स्वतन्त्रता र सुरक्षामा उसले खोजेको गास, बास र कपास सहज छ ।
ऊ दालभातको बारेमा सोँच्दै थियो । कार्ल माक्र्सको मुकुण्डो लगाएर कोही उसको अघि उभिन आइपुग्यो र भन्यो– ‘वीर बहादुर ! दालभात त हिजो पनि खाएकै हो नि ! यत्रो ठूलो क्रान्ति पछि दालभातको किन पीर ? अब त तिमीले ठूलो कुरा सोच्नु पर्छ ।’
त्यो ठूलो कुरा के हो । उसलाई थाहा थिएन ।
माओ, बीपी, पुष्पलाल, गणेशमान, किसुनजी, मदन–आश्रितलगायत अनेक महान् नेताहरूको मुकुण्डो लगाएर अनेकन् खेलाडीहरू वीरबहादुरको अघि उभिन आइपुगे । तिनले वीरबहादुरसँग ठूल्ठला कुरा गरे । विकासका कुरा गरे । समृद्धिका कुरा गरे । आकाश–पातालका कुरा गरे । नयाँ युगको कुरा गरे ।
वीरबहादुरले तिनका कुरा बुझेन किनभने तिनले दालभातका कुरा गरेनन् । तिनले त अजम्मरी ‘अमृत’को कुरा गरे ।
अमृतको कुरा गरेर तिनले वीरबहादुरलाई ‘बुद्धु’ बनाए । मानौं, कवि भूपिको ‘वीर’ अब ‘बुद्धु’ भयो ।
मुकुण्डो लगाएकाहरूले वीरबहादुरलाई छक्काइसकेका थिए । तिनका कालो जादूमा वशीभूत उसको मनमा ‘अमृत’को सपना अंकुरित भइसकेको थियो ।
तर अमुक ईश्वरले घडामा भरेर स्वर्गबाट कुनै अप्सरा हस्ते पठाइदिएकोे अमृत त उसको पहुँचमा थिएन । त्यसैले मुकुण्डाधारीहरूको योजनामा अमृत बनाउने विचार गर्‍यो ।
खोज्दै जाँदा थाहा पायो–जगतमै रहेछन् अमृत तत्व ।
जस्तो कि ? जस्तो कि मह !
मह जीवनका लागि साह्रै पोषणयुक्त र कल्याणकारी । जीवनदायिनी सबै पौष्टिकतायुक्त । हजारौं वर्ष नबिग्रिने । बासी नहुने ।
उसले मह बनाउने विचार गर्‍यो । ऊ सयौं हजारौं घारमा हजारौं लाखौं लिटर मह जम्मा गर्न चाहन्थ्यो ।
ऊ त्यो मह, दुनियालाई बाँड्न चाहन्थ्यो ।
तर मह बनाउनलाई ऊ आफै मौरी थिएन । त्यसैले उसका लागि मह बनाउनु परिश्रमले पहाड उचाल्नु जस्तै थियो । वा, पहाडलाई सम्याएर खेत तुल्याउनु जस्तै थियो ।
उसले हिम्मत हारेन । धेरै मिहिनेतपूर्वक आफ्नै हृदय राखेर उसले रानोमौरी छान्यो । आफ्नै रगत राखेर भालेमौरी बनायो । आफ्नै पसिना मिसाएर कर्मीमौरीहरू बनायो । अनि, मह जम्मा गर्ने जिम्मा दिएर तिनलाई घारमा पठायो । रानोमौरीको वरिपरि गोलबन्द भएर ती घारमा छिरे । ती स्वतन्त्रतापूर्वक चरनमा उडे ।
वीरबहादुरले आफ्नै रामकहानीबाट सिकेको थियो–साधारण जीवनबाट नै असाधारण उर्जा निस्कन्छ । सोँचेको थियो–उसका मौरी पनि २४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले उड्ने छन् जसरी एउटा साधारण मौरी उड्न सक्छ । एक सेकेण्डमा दुई सय पटक पखेटा चलाउने छन् जसरी एउटा साधारण मौरीले सक्छ । ती त्यति नै जाँगरिला हुनेछन् जति साधारण मौरी हुन्छन् ।
सोँचेको थियो–आम अस्तित्व नै बलशाली हुन्छ । उसका मौरीले एक पटकमा १० किलो मिटरसम्मको दूरी पार गरेर ५० देखि एक सयसम्म फूलको रस जम्मा गर्नेछन् जसरी आम मौरीले गर्छन् । एक किलो महका लागि ४० लाख फूलको रस लिनेछन् र पृथ्वीको तीन फन्को गर्न सकिने ९० माइल बराबरको यात्रा गर्नेछन् जसरी आम मौरी गर्छन् । ती त्यति नै सिर्जनशील हुनेछन् जति आम मौरी हुन्छन् । त्यति नै अथक र गतिशील हुनेछन् जति आम मौरी हुन्छन् ।
तर बिस्तारै, रानोमौरीलाई अर्को कुनै मौरी, रानो मौरीको सिंहासनमा बस्ने दाउ खोजिरहेछ भन्ने लाग्यो । एउटा घारमा दुईवटा रानो मौरी त असम्भव, अप्राकृतिक र प्रत्युत्पादक कुरा नै थियो । परिणामतः रानो मौरी बिस्तारै आशंकित भयो । आशंकाले अहङ्कारको प्रतिमूर्ति बन्यो । र, बरा ! उसको आकांक्षामा तुसारापात भयो । सपनामा बज्रपात भयो ।
बिस्तारै बिस्तारै घारभित्र शत्रु पक्षका जासुस छिर्न थाले । पुतलीको रूपमा घारमा पसेका ती झुसिलकिरा खासमा मह–शिकारी थिए । झुसिलकिरासँग रानो मौरीले गुप्त मन्त्रणा गर्न थाल्यो । रानोको वरिपरी नझुम्मिने र रानोको स्तुति नगाउने सबै रानोका शत्रु भए । रानोले आफ्ना काल्पनिक शत्रुका विरुद्ध षडयन्त्र र छलछामको गोटी चाल्न थाल्यो ।
क्रमशः रानोले कर्मीमौरीलाई प्रेम गर्न छाड्यो । कामचोर मौरीले घेरिएर बस्न रुचायो । कर्मी मौरीप्रति असहिष्णु भयो । मौरीको गोला आपसी कलहले टुटफुट भयो । छिन्नभिन्न भयो । थोरै जम्मा भएको मह पनि कामचोर मौरी र झुसिलकिराले खाएर सिध्याए ।
रानोमौरीले कर्मीमौरीलाई गतिशून्य बनायो । रानोमाथि प्रश्न उठ्यो । तर प्रश्न उठ्दा उदेक भयो । उदेक के भयो भने रानोमौरीले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूका विरुद्ध आफ्ना वरिपरि झुम्मिएका कामचोर मौरीलाई अरिङ्गाल बनेर जाइलाग्ने आदेश दियो ।
वीरबहादुरले हेर्दाहेर्दै कामचोर मौरीका पेट अभिमानले फुलेर चौडा भए । टाउको र आँखा शक्तिको नशाले रनन्न रन्केर ठूला भए । खुट्टा र पखेटा उन्मादले तन्किएर लामा भए । फूलको रस टिप्ने जिब्रो विषालु खील बन्यो ।
वीरबहादुरले विश्वास गरेको मौरीको ठूलो हिस्सा त्यसरी अरिङ्गालमा पतन भयो । अरिङ्गालको बथान यत्रतत्र जो कोहीलाई विषालु खीलले डस्दै अहङ्कारको आकाशमा उड्न थाल्यो । अरिङ्गालले कति पटक त वीरबहादुरकै निधारमा डसेर उसलाई इन्तु न चिन्तु बनायो ।
हेर्दाहेर्दै अझै उदेक भयो । रानोमौरीलाई परिक्रमा गरिबस्ने कामचोर मौरी फूलको खोजीमा निस्किनै छाडे । परागसेचन गरेर उत्पादन प्रक्रियामा भाग लिन छाडे । बरु महाजन र व्यापारीका जुठ्यानमा लडीबुडी गर्न थाले । कमिशनखोर र भ्रष्टले तयार पारेको विषाक्त चास्नीमा डुबुल्की मार्न थाले । चास्नीमा डुबेपछि मोटाएर चिल्लिए । पेट पुटुस्स बाहिर निस्कियो । शरीर सोलोडोलो नरम र सर्लक्क सेतो भयो । चास्नीको तापले झुरो भएको तिनका पखेटा भने चास्नीकै चिपचिपेका कारण यत्रतत्र चप्किएर छुटीगए ।
रानोमौरीका कामचोर मौरी पखेटाविहीन भए । उड्न नसक्ने भए ।
हे बरै ! ती त ठूलाठूला धमिरा भए ।
बिस्तारै रानो मौरी, रानो रहेन । धमिराको सरदार बन्यो । रानोको स्तुतिगानमा रमाउने मौरी यत्रतत्र धमिराका स्वरूपमा देखिन थाले । अनेक संरचनाहरूलाई धुल्याउने धुल्याहाको रूपमा देखिन थाले ।
वीरबहादुरको मह–सपना, आस्था र विश्वासभरि धमिरा सलबलाउन थाले । दुनियाँका सिर्जना र सपना, इच्छा र सम्भावनालाई धुल्याएर धमिराले यत्रतत्र सर्वत्र अहङ्कारको ढिस्को उठाउन थाले । वीरबहादुरको भूगोलभरि धमिरै धमिरा भए ।
वीरबहादुर साँच्चै नै कवि भूपिको ‘बुद्धु’ पात्र बन्यो ।
सुनौला मह भण्डार जम्मा गर्न पठाएका मौरीहरू यति विध्वंशक बन्लान् भनी वीरबहादुरले कल्पनाधरि गरेको थिएन । अक्कबक्क वीरबहादुर देख्छ– धमिराले स्वप्नील धरोहरहरूमा विध्वंश–धुलोको ढिस्का उठाइरहेका छन् । ऊ सुन्छ– धमिराको सरदार ती ढिस्कालाई समृद्धिको धरहरा भनिरहेछ । प्रगतिको भिउ–टावर भनिरहेछ ।
वीरबहादुर देख्दैन कर्मीमौरीहरूको एकताबद्ध श्रम र सीप
देख्दैन घारमा सुनौला महको भण्डार ।
देखिनुपर्ने कुरा देखिएको छैन । नदेखिनुपर्ने भने जबर्जस्त रूपमा देखिएको छ ।
वीरबहादुर थक्थकाउँछ –साह्रै अनपेक्षित भयो । मौरीहरू धमिरा भए ! त्यस्तो भयो !
ऊ चिउँडोमा हात राखेर सोच्छ–त्यस्तो नभएको भए, यस्तो कहाँ देखिन्थ्यो होला र ? अग्ला–अग्ला सिंहासनहरू शायद यति कुरुप र जीर्ण देखिने थिएनन् । ज्ञानविज्ञानका किताब धुलिसात् हुने थिएनन् । घोषणापत्र र सिद्धान्तका ठेलीहरू माटोमा परिणत हुने थिएनन् । सर्वत्र विध्वंशको धुलो उड्ने थिएन । यति कुरुप होइन, वर्तमानको अर्कै चित्र हुन्थ्यो । बाहिर त्यही देखिन्थ्यो जे भित्र हुन्थ्यो ।
तर त्यस्तो भयो ! वीरबहादुर सोँच्छ– बाबै ! धमिरा छन् ! सर्वत्र रगरग गरिरहेका छन् !
अनि न ऊ असह्य दुखेर पनि नदुखेजस्तो गरी सहन बाध्य छ । डिलमै आएको आँसुलाई पनि बलात् आँखाभित्रै फर्काउन विवश छ । खुट्टा काटिइसकेपछि पनि दौड प्रतियोगितामा सामेल हुन श्रापित छ । हात काटिइसकेपछि पनि बलात् पटक–पटक ‘स्वस्तिक छाप’ ठोकेर धमिराकै ब्यालेट बक्समा भोट हाल्न अभिशप्त छ ।
र, त्यही धुलोले बिझाएर वीरबहादुरको आँखा पोल्दैनथ्यो । छाती पोल्दैनथ्यो । हावा सफा हुन्थ्यो । पानी सफा हुन्थ्यो । मौसम सफा हुन्थ्यो । मौसमको सुन्दर रङ्ग देख्ने आँखा सफा हुन्थ्यो ।
र, सबै सबै छ्याङ्गै देखिन्थे । देखिन्थे–तुइनमा झुण्डिइरहेका नानीहरू देखिन्थे । डुबानमा छट्पटिइरहेका पुछारको देहातहरू देखिन्थे । पहिरोले लछारेका गाउँहरू देखिन्थे । क्रूर बजारले लुटिरहेकाहरूका पीडा र आक्रोश देखिन्थ्यो । वर्षौंदेखि भुइँचालोको खण्डहरमा छट्पटाइरहेको घाउ देखिन्थ्यो ।
देखिन्थे–खोप र उपचारको पर्खाईमा छट्पटिएका बाजेबज्यैको लाइन देखिन्थे । जलिरहेको बाती जस्ता आमाहरू त्यसैमा थपिन्थे । मुगलानमा भासिएका बाबाहरू देखिन्थे । भरिया नानीहरू देखिन्थे । उखुको कोलमा पेलिएका किसान देखिन्थे । आधुनिक मिलमा पिसिएका श्रमिकहरू देखिन्थे । कथित ‘सडक मानवविहीन सहर’ मा भोका नाङ्गा देखिन्थे ।
वीरबहादुर सोँच्छ–धमिरा नभएका भए ती सबै सबै देखिन्थे ।
तर धमिरा छन् । र, माथिदेखि तलसम्म धमिराबाहेक अरु कोही देखिएका छैनन् ।
मौरीबाट धमिरामा परिवर्तनलाई क्रमागत विकास (इभोलुसन) भन्न सकिँदैन । क्रान्ति (रिभोलुसन) त झन् भन्नै सकिन्न । तब के हो यो ? के यो प्रतिक्रान्ति (एन्टी–रिभोलुसन) हो ?
अनेकन् मुकुण्डोधारीहरूबाट ‘बुद्धु’ बनाइएको वीरबहादुरलाई यो कुरा थाहा छैन ।
उसलाई त थाहा छ– यो धमिराले भोग गरिरहेको समय हो । उसका शरीरमा धमिराहरू रगरगाइरहेछन् ।
उसलाई थाहा छ–आफ्नै रामकहानी बिर्सेर चुपचाप बस्यो भने ऊ, धमिराले उसको शरीरलाई मसिनो गरी धुल्याउनेछन् । अन्ततः उसको शरीरलाई माटोको ढिस्कामा परिणत गरिदिनेछन् ।
माटोबाट जन्मेको शरीर बिलाउने त माटोमा नै हो नि ! तर असमयमै माटोको ढिस्को बन्नु वीरबहादुरलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।
सोँच्छ–मौरीबाट जन्मिएका धमिरा ‘वंशानुगत धमिरा’ भन्दा अनियन्त्रित खतरनाक हुँदा रहेछन् ।
‘वंशानुगत धमिरा’ भन्दा असिमित विध्वंशकारी हुँदा रहेछन् ।
वीरबहादुर आफैलाई प्रश्न गर्छ– उसले त्यति मिहिनेतपूर्वक घारमा पठाएका मौरी के साँच्चै नै मौरी थिए ?
एउटा अनिश्चित पश्चाताप, ग्लानि र क्षोभले डस्न थाल्छ उसलाई ।
शारीरिक बनावट, संगठन–संरचना, बासस्थानको बनोट, प्रजनन प्रक्रिया, विकासक्रम र कार्यशैलीमा धेरै समानता हुने भएकाले अस्थायी पखेटावाला धमिरालाई नै उसले मौरी ठानेको पो थियो कि ?
वीरबहादुर आफैले उठाएका प्रश्नहरूले थिचिएको थियो ।
उता किताबमाथि धमिराको आक्रमण सर्वत्र फैलिरहेको थियो । ठीक त्यहीबेला एउटा पुरानो पुस्तकालयमा धमिराले किताब माथि धावा बोल्यो । त्यो एक जीव विज्ञानको किताब थियो । पानाका केही पंक्तिहरू मात्र देखिए । लेखिएको थियो– मौरी र धमिरा दुबै आर्थोपोड्स वर्गका प्रजाति हुन् ।
मतलब समानता !
अरु पनि केही पंक्तिहरू देखिए । त्यसमा लेखिएको थियो– तर मौरी र कमिला हाइमेनोपटेरा उपगणमा पर्छन् । धमिरा र साङ्ला आइसोपटेरामा पर्छन् ।
मतलब असमानता !
धमिरा र साङ्ला ! कस्तो दिगमिग लाग्ने है ?
खासमा वीरबहादुरले घारमा पठाएका धमिरा थिएनन् । ती मौरी नै थिए । र, वीरबहादुर यो कुरामा ढुक्क पनि थियो ।
र, यदि ती मौरी थिए भने उपगण नै फेरिएर धमिरा बन्नु सम्भव छैन । ती खासमा मौरी नै थिए । मौरीको आवरणमा धमिरा थिएनन् ।
तर वीरबहादुरलाई लाग्छ– मौरीबाट धमिरा जन्मनु त उदेकै भयो ! ऊ उदेकको चक्रव्यूहमा रिंगिरहन्छ ।
बरा ! उसलाई थाहा छैन–खासमा उसको उदेक जायज छैन ।
किन उदेकिनु ?
ग्रीकदेखि भारतीय मिथकहरूमा, कोरियनदेखि जापानी लोक कथाहरूमा, चीनिदेखि नेपाली दन्त्यकथाहरूमा देवता श्रापित भएर मान्छे बन्छ । मान्छे श्रापित भएर ढुंगा बन्छ । राजा श्रापित भएर व्वाँसो बन्छ । किशोरी श्रापित भएर कोइली बन्छे । सर्प मान्छे बन्छ । माछो स्त्री बन्छ । आदि । इत्यादि ।
भनेपछि–मौरी किन धमिरा बन्न सक्दैन ?
वीरबहादुरको युग कुनै मिथकीय युगभन्दा फरक त छैन । यस्तो युग जहाँ जे पनि सम्भव हुन सक्छ । मिथकीय युगमा अनेकन मेटामर्फोसिस र जैविक रुपान्तरण सम्भव हुन्छन् । त्यसैले उसले पठाएका मौरीहरू खासमा मौरी भएर पनि धमिरा बनेका थिए । समयक्रममा ‘प्रभु’ले तिनलाई धमिरामा रुपान्तरित हुने श्राप (वरदान ?) दिएको थियो । अन्ततः ती धमिरा भए ।
धमिरा भएपछि तिनले भएभरका काठपात खान थाले । जङ्गल खान थाले । माटो खान थाले । ढंगा खान थाले । नदी खान थाले । ज्ञानविज्ञान र विचार खान थाले । सिद्धान्त, आदर्श र सपना खान थाले ।
वीरबहादुर धमिराको यो अनवरत् भक्षण देखिरहेछ । ऊ अनुमान गर्छ–यो भक्षण साह्रै खतरनाक छ । त्यसैले धमिराबाट मुक्तिको प्रश्न जल्दोबल्दो प्रश्न हो ।
कुनै बेला उसैले बनाएका मौरी आज धमिरा बने । यी धमिरा फेरि मिहिनेती मौरी बन्लान् भन्ने आशा मरिसकेको छ ।
धमिराको विध्वंशले जन्माइरहेको चिन्ताबीच क्लान्त वीरबहादुर आफ्नो हैसियत अनुसार सोँच्छ–अब नयाँ रानो मौरी बनाउनु पर्छ । नयाँ नर मौरी बनाउनु पर्छ । नयाँ कर्मीमौरी जन्माउनु पर्छ ।
धमिराको सरदारलाई लाग्छ– यो चिन्तन आज एक पराजित चिन्तन हो !
तर इतिहासलाई थाहा छ–समय नै मिथक बाँचिरहेको बेला वीरबहादुर पराजित चिन्तन बोकेर धेरै समय हिँड्ने छैन । एकदिन ‘अमृत’ मोह त्यागेर उसको चिन्तन ‘मौरी’ बाट मान्छेमा सर्नेछ ।
मुकुण्डोधारीहरूले वीरबहादुरलाई, के फेरि ‘बुद्धु’ बनाउन सक्नेछन् ?
प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ १५:०४